समाचार Archives - Page 243 of 266 - Like For Nepal
एसईई परीक्षा बारे जरूरी सूचना ; राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पढेर शेयर गर्नुहोला।
१२ फागुन । एक साताको फरक राखेर कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को अन्तिम वार्षिक परीक्षा लिने गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ । बोर्डले २०७८ सालको जेठ तेस्रो साता एसईई र अन्तिम साता कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा लिने गरी तयारी थालेको हो । बोर्डका उपाध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले परीक्षाका लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै चैतभित्र औपचारिक परीक्षाको कार्यतालिकाबारे औपचारिक रूपमा निर्णय गरिने जानकारी दिए। हाल दुवै तहको परीक्षाका लागि बोर्डले विभिन्न चरणको काम गरिरहेको छ । बोर्डको यो तयारी कार्यान्वयन हुन सके विद्यार्थीको शैक्षिक सत्रमा दुई÷तीन महिनाको हाराहारीमा मात्र क्षति हुनेछ । विगतका वर्षमा चैतमा एसईई र वैशाखमा कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरिएको थियो । एसईईका लागि देशभरका विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन फाराम भर्ने म्याद फागुन ६ गते...
Breaking news लड्डु खुवाउँदै खुसियाली मनाए, संसदले नै नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने || TNT TV
Breaking news लड्डु खुवाउँदै खुसियाली मनाए, संसदले नै नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने || TNT TV नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतको फैसला जनताको पक्षमा भएको बताउनुभएको छ ।मंगलबार (आज) साँझ सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेसँगै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो । अध्यक्ष दाहालले अदालतको फैसलाले नेपाली जनताको जित भएको बताउनुभएको छ । उहाँले संविधानवाद, नेपाली जनता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको जित भएको बताउनुभएको छ ।संवैधानिक इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत भइ जारी गरिएको निर्णय असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक र कानूनी रूपमा शून्य हुने गरी बदर गरिएको छ ।’...
त्यो रात ९ बजे सम्म यही होटेलमा थिए प्रविन | त्यसपछि के भयो ? नालीबेली खोलिन होटेल सहनीले हेर्नुहोस यो समाचार पनि पढ्नुहोस। प्रचण्डलाई धोका दिएका थापा अन्तत एक्लिए, यि नेताले पनि छाडे साथ, बादल र ओलीका मान्छे अब कुनो फर्केर रुने अवस्थामा पुगे, अन्तत ओलीलाई देखाइदिए प्रचण्ड र माकुनेले, भोली बिहानै यस्तो नयाँ कम हुनेछ नेपालमा काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका आफ्ना सहकर्मी साथी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई धोका दिएर ओली समुहमा आएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा फेरी एक्लिएका छन् । ओलीलाई साथ दिएकै कारण उनको गुटमा रहेका पूर्व माओवादीले उनलाई यस अघि नै साथ छोडेका थिए । पम्फा भुषाल, देव गुरुगं लगायतका नेताहरुले यस अघि नै उनको साथ छोडेर प्रचण्डको समुहमा जाने निर्णय गरे ।तर थापा वाइसियल ब्यझिाएर युवा पंक्ति आफ्नो साथमा छ भन्दै ओलीसंग वार्गेनिगं गर्ने मन...
Feb232021 by fornepalNo Comments
Breaking भर्खरै सर्वोच्चले गर्यो संसद पुनर्स्थापनाको फैस*ला, बालुवाटारमा खै*लाबै*ला मच्चि*यो (भिडियो हेर्नुहोस्)
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । भर्खरै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले पुस ५ गते सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा 'ब्युँतिएको' छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए । फैसलाको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश भएको छ । पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्...
अपि’ल त्रिपाटी खै ? नयाँ टिभीमा रबि लामिछानेसंगै राजेश हमाल, रमेश प्रसाई, दिपकराजको एकै साथ
चर्चित टेलिभिजन पत्रकार रवि लामिछानेले नयाँ टेलिभिजन ‘ग्यालेक्सी टेलिभिजन फोर के’ ल्याउने घोषणा गरेका छन् । राजधानीको तारे होटल म्यारिअटमा उनले टेलिभिजन लन्च गरे ।पत्रकार सम्मेलनमा टेलिभिजनले प्रसारण गर्ने लाइनअप पनि सार्वजनिक गरिएको छ । जसमा अभिनेता राजेश हमालले होस्ट गर्ने ‘को बन्छ करोडपति’ देखि दीपकराज गिरीको ‘क्राइम प्याट्रोल’ सम्म छन् ।सामाजिक अभियन्ता रमेश प्रसाइँले ‘लाल मोहर’ नामक टकसो चलाउने भएका छन् । आफ्नो टकसो नेता केन्द्रितभन्दा भुइँमान्छे लक्षित हुने उनले बताए । विगतमा एपीवान टिभीमा प्रसारण भएको को बन्छ करोडपछि अब ग्यालेक्सी टिभीमा प्रसारण हुने भएको छ ।हमाल र गिरीले आफूहरुले संचालन गर्ने कार्यक्रमको पोस्टर अनावरण उक्त अवसरमा गरे । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संचालक डा. महावीर पुनले इनोभेसन सम्बन्धी कार्यक्रम होस्ट गर्ने भएका छन् । उनकी व्यवस्थापक मीरा पोखरेलले यो कार्यक्रम...
रबि लामिछानेले सुरु गरे नया टेलिभिजन,रमेश प्रसाईं राजेश हमाल देखि महाबिर पुन सम्म (भिडियो हेर्नुस्)
सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेलगायतको संलग्नतामा नयाँ टेलिभिजन सञ्चालनमा आउने भएको छ । मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी लामिछानेले ‘ग्यालेक्सी फोरके’ टेलिभिजन च्यानल शुभारम्भको घोषणा गरेका हुन् । सो टेलिभिजन नेपालमै पहिलो फोरके प्रविधिमा आधारित भएको लामिछानेले जानकारी दिए । न्यूज २४ टेलिभिजनमा ‘सिधा कुरा जनतासँग’ सञ्चालन गरेका उनको कार्यक्रम लोकप्रिय रहेको थियो भने नयाँ टेलेभिजन खोल्नकै लागि भनेर उनी हालै सो संस्थाबाट बाहिरिएका थिए । उद्घाटन समारोहमा लामिछानेले टेलिभिजनले आम सर्वसाधारणको हेडलाइन बनाउनुका साथै भरपूर मनोरञ्जन पनि दिने बताए । ‘जतिपनि आम सर्वसाधारण हुनुहुन्छ, जसको मुद्दा ओझेलमा पर्यो ती सर्वसाधारणको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना न्यूज र हेडलाइन बनाउँछौं’, लामिछानेले भने टेलिभिजनको अध्यक्षमा डीबी राई रहेका छन् भने उपाध्यक्ष छविलाल बञ्जाडे र प्रबन्ध निर्देशकमा स्वयम् र...
न्यूज २४ टेलिभिजनमा ‘सिधा कुरा जनतासँग’ छाडेपछि आजबाट नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्दै रवि लामिछानेकाठमाडौं । चर्चित टेलिभजन प्रस्तोता रवि लामिछानेले आज बाट नयाँ कार्यक्रम शुरु गर्ने भएका छन् । उनले सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत आजबाट नया कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन् । उनले मंगलबारबाट नयाँ यात्राको शुरूवात गरेको बताएका छन् । न्यूज २४ टेलिभिजनमा ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम छाडेपछि उनले नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी गरेका हुन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन नयाँ यात्राको शुरूवात गर्दैछौं। बिस्तृतमा भोलि बिहान ११:४५ बजे पछी विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराउछौ। उनले मंगलबारबाट नयाँ यात्राको शुरूवात गरेको बताएका छन् । न्यूज २४ टेलिभिजनमा ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम छाडेपछि उनले नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी गरेका हुन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन नयाँ यात्राको शुरूवात गर्दैछौं। बिस्तृत...
न्यूज २४ टेलिभिजनमा ‘सिधा कुरा जनतासँग’ छाडेपछि आजबाट नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्दै रवि लामिछानेकाठमाडौं । चर्चित टेलिभजन प्रस्तोता रवि लामिछानेले आज बाट नयाँ कार्यक्रम शुरु गर्ने भएका छन् । उनले सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत आजबाट नया कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन् । उनले मंगलबारबाट नयाँ यात्राको शुरूवात गरेको बताएका छन् । न्यूज २४ टेलिभिजनमा ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम छाडेपछि उनले नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी गरेका हुन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन नयाँ यात्राको शुरूवात गर्दैछौं। बिस्तृतमा भोलि बिहान ११:४५ बजे पछी विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराउछौ। रवि लामिछानेले दाईको खुट्टा ढोगदै गरे यस्तो घोषणा, यस्तो छ नयाँ कार्यक्रम|पुगे रमेश देखि राजेश सम्म ...
खुशीको खबर। कन्चनको स्वा’स्थमा आयो सुधार , 51 औ दिनमा यस्तो हजुरआमाले सकिन्न आफुलाई सम्हा*ल्न। भिडियो हेर्नुहोस याे समचार पनि पढ्नुहोस् कमर्सियल बैकिङ इतिहासमा माछापुच्छ्रे बैंकले पहिलो पटक आफ्नै मोबाइल वालेट सञ्चालन ल्याएको छ। बैंकले विभिन्न नयाँ विशेषता र सुविधासहित ‘रेमिट्याप’ मोबाइल वालेट सञ्चालनमा ल्याएको हो। विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स सिधै वालेटमा जम्मा गर्न पाइने प्रमुख सुविधा भएको बैंकका विप्रेषण प्रमुख सुदन भण्डारीले जानकारी दिए। तर यो सुविधा केही दिनपछि मात्रै प्रयोग गर्न मिल्नेगरी सञ्चालनमा आउने उनले बताए।’यसअघि कुनै पनि वालेटमा नभएका सुविधा हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौं,’ भण्डारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘दोस्रो चरणमा विश्वभर रहेका नेपालीले रेमिट्याप एपबाटै पैसा पठाउन सक्नेछन्।’ एपमा मुख्यगरी तीन वटा फरक विशेषता रहेको उनले जानकारी दिएपहिलो त एप प्रयोग गरेपछि भर्चुअल कार्ड बन...
अर्को साल बिहे गर्छु; छुट्टी मिलाएर दुई महिना अघि नै आइज है बुनु” भनेका दाजुको कसरी म,ला,मी जान सकूँ ? महान चेली समिक्षाको रो,द,न (भिडियो सहित) यो पनि पढ्नुहोस् अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको नेपालको संविधानको धारा ७६ लेख्ने र त्यसमा ल्याप्चे लगाएर सदर गर्ने तत्कालीन संविधानसभाका सदस्यहरूले त्यसको फरक–फरक व्याख्या गरिरहेका छन्। सुवास नेम्बाङले गरेको व्याख्याको ठीक विपरीत व्याख्या अग्नि सापकोटाले गरेका छन्। यो संविधान निर्माणको श्रेय लिने दलका नेताहरू माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानमा छैन भनेको अधिकारलाई ईश्वर पोखरेल र टोपबहादुर रायमाझीले छ भनेका छन्। आफैले कोरेका वाक्यहरूको परस्पर विरोधी व्याख्या गर्नुले संविधान निर्माणकर्ताको क्षमता, इमानदारी र नियतमा शंका उत्पन्न हुन्छ। पाठ्यसामग्री नबुझेको शिक्षकद्वारा अध्यापन गराइएका विद्यार्थीको जस्तो हविगत तिनका कार्यकर्ताको ...